DateMyPet.com : Ngathi
Esinye isiza ukuthandana? Hayi. Isiza intlanganiso kubantu pet? Ewe.
Ingcamango kuba DateMyPet.com waqalisa ngexesha ukuhamba nenja yam park zethu zengingqi. Njengesiqhelo, abantu baya kuthi baze bachaze indlela cute yena. Ngokuqhelekileyo oku kuya kukhokelela kwincoko. Le ncoko ziqala ukusuka kwintetho nakuyo elula iinkcukacha malunga nobomi babo. nasemdudweni kwaye siza kube bencokola ngathi abahlobo bakudala. Thats amandla izilwanyana ethu. Zinikela ikhonkco eqhelekileyo, ukuqonda singoobani.
Le abantu bendidibana ezi iintlobo isusela ixesha elide ngovuyo izibini ezitshatileyo uphuhlisa. Nangona ubomi babo zahluke kakhulu, bonke belana ngothando izilwanyana. Nokuba umnini pet okanye 'sifuna-to-kuba'. Ethetha uphuhlisa, Lothusa indlela abaninzi imihla yabo kunye nobudlelwane yaphela ngenxa kwelinye iqabane babungavisisani uthando lwabo izilwanyana zabo. Ezi ziqala ukusuka 'yena Bandithiya uluchwe inja yam’ ukuba 'yena yaliwa nekati yam’ kwaye okubalaseleyo 'acinga mna uphambene kuba ndiya kubaphatha baseziintsana kubo'. Xa isigqibo weza ukhethe phakathi iqabane okanye isilwanyana – yaba akukho brainer kuninzi. Isilwanyana iphumelele.
Ngoko ke naku, “Ukuba ufuna ukuthandana nam, kufuneka ukuthandana pet yam”. Lwakho drive ngasemva kule website. Ukuba ubusazi isandla kuqala ukuba umntu ngumthandi pet, iza kwenza kube lula kakhulu izinto. Leyo ikhonkco ngamandla ukuze kwakhelwa phezu.
DateMyPet.com akukho nje omnye site ukuthandana. Ndifuna ukuba asekuhlaleni abanini pet. Ukukhangela uthando okanye ubuhlobo. Ngoko zama kwaye Sixele ukuba ucinga ntoni.
Ukuba akukho umnini pet, ukuba samkela kakhulu. Kodwa khumbula nje, “…thandanayo pet yam”.
NAWE simahla >
amalungu : Kuba imibuzo inkxaso, ndiyacela ufaka igama elithile kwi-akhawunti yakho
contributors: Ukuba ufuna ukunika umxholo inqaku site yethu, nceda uqhagamshelane nathi nombhali AT datemypet.com
Lemibuzo Press: Nceda ufake isicelo sakho ukuba cinezela AT datemypet.com
yasekwa ngonyaka ka 2004, Umhla My Pet waba site ukuthandana elikhokelayo abathandi pet enye. Ukuba siqhubekeke ukukhula kunye ngcono ukukhonza amalungu ethu, e 2014, Umhla My Pet yasebenzisana Venntro Inc (kwiqela leendaba jikelele) ukuba babe yinxalenye yothungelwano ukuthandana lwehlabathi, ezifikelela kwizigidi uphuhlisa ehlabathini lonke.